health care reform act bill text: manfaat daun sirsak untuk gula darah
Posted on Tuesday, March 25, 2014 by Lisa Fernandez
manfaat daun sirsak untuk gula darah Soursop doo uru n'ihi na ogbu na nkwonkwo na-esonụ ọgwụgwọ ị na-agbalị ka a dị ọnụ ala ọzọ . Abamuru nke soursop epupụta dị efficacious aka imeri ọrịa dị iche iche . Ọ bụghị naanị na ogbu na nkwonkwo , ma a dịgasị iche iche nke ndị ọzọ na ọrịa ndị dị ka hemorrhoid , gout , afo ọrịa , na ọbụna ọrịa cancer pụrụ imeri ihe na-eji soursop epupụta .
Alternative na nkà mmụta ọgwụ eji soursop akwukwo pụtara ọnụ ala . Anyị pụrụ n'ụzọ dị mfe ịhụ soursop epupụta anyị gburugburu . Na-emekarị soursop ọtụtụ kowụhọ ke yad ma ọ bụ backyard . Ma ọ bụrụ na ị na emi osisi , pụrụ ịzụta ke ufọkurua na-enye herbs kesehatn .
Soursop doo Uru N'ihi na ogbu na nkwonkwo
Rheumatism bụ ọrịa abnormalities ke nkwonkwo , na-eme ka ihe mgbu na stiffness . Nkịtị mgbaàmà idi ọsọ ke ọrịa na ọrịa ogbu na nkwonkwo na- ozizi atọ ma ọ bụ karịa nkwonkwo na n'otu oge ahụ, ozizi na ihe mgbu bụ na nkwonkwo na ozizi na ihe mgbu na-emekarị ihe n'akparamagwa na -egbu mgbu symmetrical nlereanya n'otu nkwonkwo na abụọ nke ahu na n'ozuzu na-awakpo njikọ nkwonkwo nke nkwojiaka . Ọ bụrụ na ị na-enweta ndị dị otú ahụ na nsogbu , nwere ike na-agbalị iji ihe ọzọ otú soursop epupụta .
Olee otú :
Buru ọtụtụ n'ime soursop akwukwo
Ekem mashed ruo mgbe ezigbo
Tapawa na nkukota nke soursop doo ke enye otụk idem akụkụ
Sịkwa ihe mere soursop doo ukwuu achụso n'ihi na o nwere ọtụtụ uru n'ihi na kesehatn . Na mgbakwunye na ogbu na nkwonkwo , anyị nwere ike lee uru soursop epupụta dị ka onye ọzọ ọgwụgwọ maka hemorrhoid iji eke Efrata . Olileanya ụfọdụ erite site banyere uru soursop epupụta n'elu nwere ike bara uru n'ihi na rheumatism .